UNFPA Myanmar | GBV Hotline Minimum Standards Launched for Myanmar
GBV Hotline Minimum Standards
During the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence, UNFPA is launching the Myanmar Minimum Standards for Gender Based Violence (GBV) Hotlines (available in English and Burmese). The objective of the Minimum Standards is to establishacommon understanding of what constitutes minimum phone-based support to GBV survivors in Myanmar. The 12 standards define what organizations delivering these services should prioritize to improve the quality of GBV hotline services and mitigate practices that may cause unintended harm to survivors and service providers.
The COVID-19 pandemic prompted GBV service providers around the world to increasingly provide services through telephone-based hotlines and helplines. In Myanmar, service providers were also shifting to remote GBV service provision in response to COVID-19 public health restrictions when the military takeover took place in February. The combination of public health and security related concerns and movement restrictions continued to pose access challenges for survivors and service providers in 2021. In this context, GBV hotlines remain one important option whereby women, girls and other groups at risk can access to information and other types of services that they need remotely.
Successfully operatingaGBV hotline requires that appropriate measures are in place to ensure the quality of services along with the safety and security of survivors and service providers.
“The need to ensure quality and survivor-centered approach for the GBV Hotline services has been highlighted by different stakeholders given the rapidly increasing trend of such services since 2020. Therefore, having these Minimum Standards is very timely and helpful for GBV partners operating or planning to operate GBV Hotlines. UNFPA, in close collaboration with the GBV sub-cluster in Myanmar, will promote the Minimum Standards for further dissemination and utilization.” - Eri Taniguchi, GBV Sub-Cluster Coordinator, UNFPA Myanmar
With support from the United Kingdom, UNFPA launchedaprocess to develop Minimum Standards for GBV Hotlines in Myanmar in December 2020 throughaconsultation engaging national and international GBV actors working in Myanmar. The Minimum Standards were developed over the course of 2021 byateam of international and national experts to ensure that they are rooted in global best practices while also responsive to the specific needs and context of actors providing services in Myanmar. A series of consultations were undertaken in April and May involving 59 participants from 35 organizations from Kachin, Kayin, Southern Shan, Northern Shan, Rakhine, Chin, Yangon, Mon, and Sagaing. A final validation workshop was held in June.
“The UK is proud to have supported the development of Myanmar’s first Minimum Standards for GBV hotlines. This mark an important step towards more resilient, remote case management, and will be an essential tool for civil society and service providers to support survivors across the country.” Flo Carson, Social Development Adviser, FCDO Myanmar
The Minimum Standards are now available to support practitioners, organizations and donors to improve accessibility to GBV services for under-served populations (e.g. women and girls with disabilities, Internally Displaced Persons (IDPs), LGBTQIA+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer or Questioning, Intersex, Asexual) and male survivors) compared to traditional service delivery points, to ensure accountability of GBV actors, to build trust between survivors and hotline staff and to ensure ownership and support of local communities.
"Women and girls with disabilities are more vulnerable to domestic and sexual violence. Even at their homes, they may experience rape or intimate partner violence. When they do, they may face many obstacles to access support and justice. Therefore, the rights of women and young persons with disabilities must be included in all process of GBV services. . . I feel empowered that I can provide the support through GBV Helpline and playakey role to end all forms of violence against violence against women and young people." GBV Hotline Operator
Links to English and Myanmar Versions of MS
Additional guidance and Facilitators Manuals to support capacity building of GBV actors on Hotline operations are also available upon request from UNFPA. For related inquiries, please contact: Eri Taniguchi, taniguchi@unfpa.org
မြန်မာနိုင်ငံ ကျား-မအခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ အရေးပေါ်ဖုန်းလိုင်းအတွက် အနိမ့်ဆုံးပြည့်မီရမည့် စံနှုန်းများအား မိတ်ဆက်ခြင်း
ကျား-မ အခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဆန့်ကျင်ရေး ၁၆ ရက်တာလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်း UNFPA သည် မြန်မာနိုင်ငံ ကျား-မအခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ အရေးပေါ်ဖုန်းလိုင်းအတွက် အနိမ့်ဆုံးပြည့်မီရမည့် စံနှုန်းများစာအုပ် အား မိတ်ဆက်လိုက်သည်။ အနိမ့်ဆုံးပြည့်မီရမည့် စံနှုန်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကျား-မ အခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုခံရသူများအား ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်အကူအညီပေးရာတွင် အနည်းဆုံးအနေဖြင့် ပါ၀င်ရမည့်အချက်များအပေါ် အားလုံးတူညီစွာ နားလည်မှုထူထောင်ရန်ဖြစ်သည်။ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက် ၁၂ ချက်သည်အရေးပေါ်ဖုန်းလိုင်း ဝန်ဆောင်မှုများ၏အရည်အသွေးကို တိုးတက်စေရန်နှင့် ဆက်လက်ရှင်သန်သူများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအပေါ် မရည်ရွယ်ဘဲ ထိခိုက်အောင် ပြုမိသည့် အလေ့အထများအား ဖယ်ရှားလျော့ချရန် ဖုန်းဝန်ဆောင်မှုများပေးနေသော အဖွဲ့အစည်းများမှ ဦးစားပေးသင့်သည့် အချက်များကို သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည်။
COVID-19 ကပ်ရောဂါက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကျား-မအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသောအဖွဲ့များအား ဖုန်းလိုင်းအခြေပြုဝန်ဆောင်မှုများကို မဆိုင်းမတွ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန် လှုံ့ဆော်လိုက်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖော်ဖော်ဝါရီလတွင် စစ်တပ်က အာဏာရယူပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် COVID-19 ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ တားမြစ်ကန့်သတ်ချက်များအရ ကျား-မ အခြေပြုဝန်ဆောင်မှုများအား အဝေးမှပေးအပ်ခြင်းများသို့ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်လာခဲ့ကြသည်။ ၂၀၂၁ခုနှစ်တွင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေနေနှင့် လှုပ်ရှားသွားလာမှု အကန့်အသတ်များက ကျား-မအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုခံရသူနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအကြား လက်လှမ်းမီ ချိတ်ဆက်ရာမှာ စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤအခြေအနေတွင် ကျား-မအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေး ဖုန်းလိုင်းများသည် ဘေးကျရောက်နိုင်ချေရှိသော အမျိုးသမီးများ၊ မိန်းကလေးငယ်များနှင့် အခြားအုပ်စုများက သူတို့လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အဝေးမှ ရယူနိုင်စေမည့် အရေးပါသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အောင်မြင်အဆင်ပြေစွာ လည်ပတ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အကူအညီပေးရေးဖုန်းလိုင်းဖြစ်ရန် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးကို ကောင်းမွန်စေရုံသာမက ဆက်လက်ရှင်သန်သူများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ပါ သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော အစီအမံများ ထည့်သွင်းစီမံရန်လိုအပ်သည်။
“၂၀၂၀ခုနှစ်ကတည်းက အခုလို ဝန်ဆောင်မှုပုံစံတွေ အလျင်အမြန်ပြောင်းလဲတိုးတက်လာတာနှင့်အမျှ သက်ဆိုင်ရာဆက်စပ်ပတ်သက်သူများက အရည်အသွေးနှင့် ဆက်လက်ရှင်သန်သူများအတွက် ဦးတည်ချဥ်းကပ်သည့် ကျား-မအခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေးဖုန်းလိုင်းဝန်ဆောင်မှုတွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ အကြံပြု ဖော်ဆောင်လာကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအနိမ့်ဆုံးပြည့်မီရမည့် စံနှုန်းများဟာ ကျား-အခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေး ဖုန်းလိုင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ (သို့မဟုတ်) လုပ်ကိုင်ဖို့ စီစဥ်နေတဲ့ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက် အချိန်ကောင်းမှာ ထွက်ပေါ်လာတာြဖစ်ပြီး များစွာ အထောက်အပံ့ပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ UNFPA အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက သက်ဆိုင်ရာ GBV အစုအဖွဲ့တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဒီအနိမ့်ဆုံးပြည့်မီရမည့် စံနှုန်းများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြန့်ပွားရေးနှင့် အသုံးချနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်” ဟု UNFPA Myanmar မှ GBV Sub-Cluster Coordinator ဖြစ်သူ Eri Taniguchi ကပြောပါသည်။
The United Kingdom ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် UNFPA သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမှ GBV အဖွဲ့များနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကာ ၂၀၂၀ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကတည်းက ကျား-မအခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ အရေးပေါ်ဖုန်းလိုင်းအတွက် အနိမ့်ဆုံးပြည့်မီရမည့် စံနှုန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ခဲ့ပါသည်။ ဤစံနှုန်းများကို ၂၀၂၁ခုနှစ်ကာလတစ်လျှောက်လုံး နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်းမှ ပညာရှင်များပါ၀င်သောအဖွဲ့က နိုင်ငံအတွင်းရှိ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များကို တုံ့ပြန်ပေါင်းစပ်ကာ နိုင်ငံတကာမှာ အကောင်းဆုံးသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပုံစံ အလေ့အထတို့ဖြင့် ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကချင်၊ ကရင်၊ ရှမ်းတောင်ပိုင်း၊ ရှမ်းမြောက်ပိုင်း၊ ရခိုင်၊ ချင်း၊ ရန်ကုန်၊ မွန် ပြည်နယ်များနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၃၅ ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ် ၅၉ ဦးပါ၀င်ကာ ဧပြီလနှင့် မေလတို့တွင် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲများ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး တရားဝင်အတည်ပြုသည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ဇွန်လတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
"UK အနေနဲ့ အခုလို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ ကျား-မအခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ အရေးပေါ်ဖုန်းလိုင်းအတွက် အနိမ့်ဆုံးပြည့်မီရမည့် စံနှုန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှုမှာ ပံ့ပိုးကူညီခွင့်ရတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ဒါက နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့တွေ၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူတွေအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာကို ဖော်ဆောင်ပေးရတာဖြစ်သလို ပိုမိုအားကောင်းပြီး ကြံ့ကြံ့ခံတည်တံ့တဲ့ အဝေးမှအမှုကိစ္စတွေကို စီမံဆောင်ရွက်စေနိုင်ဖို့ အရေးပါတဲ့ ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု FCDO Myanmar ၏ Social Development Adviser ဖြစ်သူ Flo Carson က ပြောပါသည်။
အနိမ့်ဆုံးပြည့်မီရမည့် စံနှုန်းများက ပညာရှင်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလှူရှင်များအနေဖြင့် လုပ်ရိုးလုပ်စဥ်ဝန်ဆောင်မှုတို့နှင့် နှိုင်းယှဥ်ကာ အကူအညီအလုံ့အလောက်မရရှိသူများဖြစ်သော မသန်စွမ်းအမျိုးသမီးနှင့် မိန်းကလေးများ၊ ဒေသတွင်း နေရပ်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရသူများ၊ LGBTQIA+ များနှင့် အကြမ်းဖက်ခံရသည့် အမျိုးသားများအနေဖြင့် ကျား-မအခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ ပိုမိုလက်လှမ်းမီ ရရှိစေရန်၊ ကျား-မအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်သူများ ပိုမိုတာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိလာစေရန်၊ ဆက်လက်ရှင်သန်သူများနှင့် အရေးပေါ်ဖုန်းလိုင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအကြား ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန်နှင့် ဒေသတွင်း လူမှုအသိုက်အဝန်းအတွင်း တာဝန်သိစိတ်ဖြင့် အကူအညီပေးတတ်လာစေရန် အထောက်အပံ့ပြု ရည်ရွယ်ပါသည်။
“မသန်စွမ်း အမျိုးသမီးနှင့် မိန်းကလေးငယ်တွေဟာ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ပိုမိုခံစားရနိုင်ချေရှိပါတယ်။ မိမိနေအိမ်၌ပင်ဖြစ်စေ မတရားပြုကျင့်ခံရမှုတွေ၊ မိမိ၏ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သော လက်တွဲဖော် မှ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ကြုံတွေ့ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရင်လည်း သူတို့ အနေနဲ့ လိုအပ်တဲ့ အကူအညီနှင့် တရားမျှတမှုတွေကို လက်လှမ်းမီ ရရှိနိုင်ဖို့ အတားအဆီးများစွာ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျား-မ အခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ပတ်သက်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဖော်ဆောင်မှုအဆင့်ဆင့်တိုင်းမှာ မသန်စွမ်း အမျိုးသမီးနှင့် မိန်းကလေးငယ်တွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို ထည့်သွင်းစီမံရပါမယ်။ သူတို့ကို ချန်လှပ်ထားလို့ မရပါဘူး။ မသန်စွမ်းသူတွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံတာကို အခုပဲ ရပ်တန့်ပစ်ရပါမယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့ အခုလို ကျား-မ အခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေး ဖုန်းလိုင်းကနေ ဝန်ဆောင်မှုပေးပြီး အမျိုးသမီးနှင့် လူငယ်တွေအပေါ် နည်းမျိုးစုံနှင့် အကြမ်းဖက်တာတွေကို ရပ်တန့်ပစ်ဖို့ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါ၀င်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားရကျေနပ်မိပါတယ်” ဟု မသန်စွမ်းသူများအတွက် ကျား-မအခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေး ဖုန်းလိုင်း၀န်ဆောင်မှုပေးနေသူတစ်ဦးမှ ပြောပါသည်။
အရေးပေါ်ဖုန်းလိုင်းအတွက် အနိမ့်ဆုံးပြည့်မီရမည့် စံနှုန်းများစာအုပ်ကို အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာနှစ်ဘာသာဖြင့် အောက်ပါလင့်တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။
ကျား-မအခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများအား စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းပေးရန်အတွက် လိုအပ်သောလမ်းညွှန်မှုနှင့် သင်တန်းဆရာလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုလည်း UNFPA ထံမှ တောင်းခံရယူနိုင်သည်။ အသေးစိတ် သိရှိလိုသည်များကို Eri Taniguchi, taniguchi@unfpa.org သို့ စာပို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။